मेरो ब्वाइफ्रेन्ड बेरोजगार छ, बिहेको के कुरा गर्नु ?’ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मेरो ब्वाइफ्रेन्ड बेरोजगार छ, बिहेको के कुरा गर्नु ?’
मेरो ब्वाइफ्रेन्ड बेरोजगार छ, बिहेको के कुरा गर्नु ?’
नायिका साम्रज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह अभिनयभन्दा अफेयर्सका कारण चर्चामा आउँछिन्। गोप्य राख्नुपर्ने दैनिकीसमेत सामाजिक सञ्जालबाट ओपन गर्न हिच्किचाउँदिनन् उनी। पहिलो प्रेमीसँगका उस्तै तस्बिर आइरहन्थे। हालै ब्वाइफ्रेन्ड देवांश राणासँग इन्डोनेसियाली मनोरम शहर बालीमा खिचेको कामुक तस्बिर भाइरल भएपछि उनको निकै आलोचना भयो। उनी अहिले चित्त दुखाउँदै बसेकी छन्। उनी अभिनित ‘मारुनी’ प्रदर्शनको तयारीमा छ। विवाद र उनको फिल्मी यात्रामा केन्द्रित भएर साम्राज्ञीसँग शुक्रवारकर्मी रीना मोक्तानले गरेको अन्तरंगः
‘मारुनी’मा के छ भूमिका ?
यसमा एकतर्फी प्रेम गर्ने प्रेमिकाको भूमिकामा छु। मायामा मर्छु कि मार्छु भन्ने स्वभावको रोल छ। यसअघि त गर्ल नेक्स्ट डोर वाला भूमिका मात्र गरेँ तर यो फिल्ममा साइको खालको भूमिका छ।
वास्तविक जीवनमा पनि मायामा हुनुहुन्छ, रियलमा पनि मर्छु कि मार्छु मार्ने खालकै स्वभाव छ हो ?
छुइन। म सबैभन्दा बढी माया आफैँलाई गर्छु। यदि कसैसँग प्रेममा छु भने त्यो व्यक्तिलाई माया त गर्छु नै तर मायामा आफैँलाई भने गुमाउन चाहन्नँ। हिंसा रुचाउँदिनँ। मैले सुनेकी छु, ब्वाइफ्रेन्डले चिट गरिरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि कति केटी सम्बन्धमा बस्ने गर्छन्। त्यस्तो केटालाई नछाड्ने तर बसेर आफैँलाई पीडा दिने गरेको सुनेको छु तर म आफूलाई पीडा दिने काम त गर्दिनँ।
तपाईँका दुई फिल्म ‘कायरा’ र ‘तिमीसँग’ चलेन। कत्तिको असर ग-यो करिअरमा ?
असर त गर्छ नि ! सबै फिल्म सुपर डुपर हिट हुँदैनन्। आफ्नो काम राम्रो भइदियोस् भन्ने हुन्छ। यी दुई वटै फिल्मले गर्दा सावधान भने भएकी छु। म पहिला एउटा पक्षबाट मात्र सोच्थेँ। पहिला बच्चाजस्तै थिएँ। त्यतिबेला कसैले राम्रो बोल्दियो भने मलाई पुग्थ्यो। त्यस्तो बच्चापनामै म फिल्मको लागि तयार हुन्थेँ। अहिले चार कुनाबाट सोच्न थालेकी छु। स्क्रिप्ट राम्रो हुनासाथ फिल्मको लागि तयार हुँदिन। धेरै कुरा सोच्छु। मेकर अनि निर्देशकको बारेमा सोच्छु। टिम पनि सोच्छु।
दुई फिल्मले धेरै सिकाएछ त्यसो भए ?
‘तिमीसँग’ र ‘कायरा’ गरेर म पछुताएको नै भने छैन। ‘कायरा’मा मैले आर्यनबाट धेरै सिकेँ। डबिङमा भोकल परिवर्तन, भोकल कन्ट्रोलमा धेरै सिकेँ। तै पनि केही न केही चुक त हुने रहेछ ! म फिल्म ब्याकग्राउन्डबाट आएको हैन। त्यसले पनि निर्णयमा प्रभाव पार्दोरहेछ। मेरो बुबाले खुकुरी चुरोटको विज्ञापन गर्नु भएको थियो। त्यो विज्ञापन त त्यतिबेला अहिलेको ट्रेलर जस्तै लामो थियो। त्यो विज्ञापन हेरेर बुबालाई फिल्मको अफर आ’को थियो तर बुबालाई फिल्म क्षेत्र सुरक्षित लाग्थेन। म फिल्ममा आउँदा बुबाको साथ थिएन तर अहिले राम्रो गर्दै गएपछि केही हदसम्म सकारात्मक हुन थाल्नु भएको छ।
भनेपछि मेकरले फिल्म बिगारिदिन्छन् ?
नेपालमा एक त राम्रो स्क्रिप्ट राइटर धेरै छैनन्। बल्ल तल्ल राम्रो स्क्रिप्ट आउन थालेको हो। स्क्रिप्ट जति नै राम्रो भए पनि मेकर र निर्देशक राम्रो छैन भने फिल्म राम्रो बन्ने चान्स कम छ। डाइरेक्टर र मेकर राम्रो चाहिन्छ।
मेरो पसर्नल लाइफको तस्बिर आफ्नो भ्युज बढाउन, पैसा कमाउनका लागि प्रयोग भयो। मलाई नै बेइज्जत गरेर समाचार आए। मेरो इमेज नराम्रो बनाइदिएपछि म जति राम्रो बोले पनि कति जनालाई नराम्रो लाग्छ, कडा लाग्छ। त्यसैले म यो विषयमा नबोल्ने विचारमा छु।
बुबा त अझै ‘फिल्म नगर’ भन्नुहुन्छ हो ?
पहिला त निकै विरोध गर्नु हुन्थ्यो। फिल्म क्षेत्रमा सुरक्षित भविष्य देख्नु हुन्थेन। हामी फिल्म लाइनको पनि होइन। गसिपहरु बन्छन्, हरेक कुराको समाचार आउँछ। तिमी सबैजनाको आँखामा पर्छाै, तिम्रो लागि सेफ छैन यो क्षेत्र भन्नुहुन्थ्यो। राम्रो काम गरेर बुबालाई देखाउँछु भनेर अघि बढ्न थालेँ। राम्रो हुँदै गयो।
गसिपको कुरा गर्नु भयो। बजारमा अहिले बालीको फोटो छाइरहेको छ नि ! मानसिक तनावै दियो भन्ने पनि सुनियो हो ?
अँ, मानसिक रुपमा यसले असर ग-यो किनभने त्यो मेरो पर्सनल थियो। मैले त्यो फोटो मेरो अकाउन्टबाट पोस्ट गरिनँ। मेरो ब्वाइफ्रेन्डको अकाउन्टमा पनि पर्सनलमा थियो तर खै कसरी बाहिरियो। उल्टै साम्राज्ञीले यस्तो फोटो पोस्ट गरिन् भन्दै हेडलाइन राखेर, के हो चाला भनेर लेखे। सबैको पर्सनल लाइफ हुन्छ। मेरो पसर्नल लाइफको तस्बिर आफ्नो भ्युज बढाउन, पैसा कमाउनका लागि प्रयोग भयो। मलाई नै बेइज्जत गरेर समाचार आए। मेरो इमेज नराम्रो बनाइदिएपछि म जति राम्रो बोले पनि कति जनालाई नराम्रो लाग्छ, कडा लाग्छ। त्यसैले म यो विषयमा नबोल्ने विचारमा छु।
बालीको त्यो तस्बिर नेपालमा भाइरल भयो भनेर कतिखेर थाहा पाउनु भयो ?
चार दिनपछि थाहा भयो। नराम्रो कमेन्टहरु अझै आइरहेको छ। फेक आइडी बनाएर मुख छाड्ने गर्छन्। मैले अरु अभिनेत्रीहरुकोमा पनि त्यस्तो फेक अकाउन्टले नराम्रो कमेन्ट गरेको देखेकी छु। हाँस उठ्छ कहिलेकाहीँ। यो समाजमा यस्ता मान्छे पनि छन् भनेर दिक्क लाग्छ।
‘कायरा’को समयमा ट्याटु काण्डले पनि दुःख दियो है ?
ट्याटु आर्टिस्टले मेरो फोटो मलाई ट्याग गरेर पोस्ट गरेपछि त्यो काण्ड मच्चिएको हो। त्यो त पोस्ट गरेको तीन घण्टापछि थाहा पाएको थिएँ। मैले उसलाई ट्याटुको फोटो राख्नु थियो भने मेरो ट्याटुको फोटो राखेको भए हुन्थ्यो। अनुहार चाहीँ किन देखाएको भनेर फोन गरेकी थिएँ। उसलाई भनेँ कि म कलाकार हुँ, दर्शक मलाई हेरिरहन्छन्। त्यसपछि उसले माफी पनि माग्यो। म त्यतिखेर पनि मेन्टली डिस्टर्ब थिएँ। मलाई त्यो ट्याटु काण्डले घिन लागिरहेको थियो। कतिले त पैसा दिन्छु साम्राज्ञीको फोटो भिडियो पठाऊ भनेर पनि भनेछन्। म त त्यो सुनेर डिप्प्रेसनमै गा’को थिएँ। नराम्रो बनाउन खोजेको देख्दा, नेगेभिटी देख्दा दिक्क लाग्दोरहेछ।
भनेपछि फोटो सार्वजनिक हुनु ठूलो कुरा थिएन ?
हाल्दे पनि जे हो त्यो सत्य लेखेर हाल्देको भए हुन्थ्यो। जानकारी राम्रो दिए पनि पुग्छ के ! साम्राज्ञीले यस्तो पोस्ट गरिन् भनेर हेडलाइन आउँछ। अब फोटो कसरी बाहिरियो भन्नेतर्फ सोच्दैनन्।
ब्वाइफ्रेन्डदेखि रिस उठ्यो होला नि ?
उसलाई पनि नराम्रो लाग्यो। अरुबाट धेरै गाली खायो। किन यस्तो गरिस् भनेर उसले गाली खाइरहेको थियो। हलिउडमै पनि केटी मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही माथि हाम्रो रुढीवादी समाज छ। यस्तो समाजमा केटी मान्छेलाई धेरै असर गर्छ। मैले पनि एकछिन गाली गरेँ ब्वाइफ्रेन्डलाई तर धेरै चाहीँ गर्न सकिनँ। ऊ त्यति वास्ता गर्ने मान्छे होइन। चिल्ड टाइपको छ। जे भयो भयो, सरी यसमै झुण्डिराख्यो भने अगाडि बढ्न सक्दैन भन्यो। म पनि त्यस्तै सोच्छु।
एकदम सपोर्टिभ जस्तो देखिन्छ नि ?
‘बाली काण्ड’मा पनि साथ दिनुभयो ?
म त सिरियस हो। मलाई मान्छेलाई हेपेर बनाइएको जोक्सहरु मन पर्दैन। अरुलाई गरेको त मन पर्दैन, झन् आफूलाई गरेको त सहनै सक्दिनँ। बालीको फोटो बाहिरिएपछि एकदिन त रुमभित्रै ओड्नेले मुख छोपेर हुँहुँहुँ गरेर रुँदै बसेको थिएँ।
आमाले त्यो फोटो हेरेर के भन्नु भयो ?
मामुलाई पनि सुरुमा मैले नै फोटो राखेको भन्ने लागेछ। धेरै रिसाउनु भयो। फोनमा उहाँलाई सबै कुरा भनेँ। घर गएर सम्झाएँ। ट्याटु काण्डमा पनि मेरो गल्ती थिएन, अहिलेको पनि मेरो गल्ती छैन भनेँ। मामुले गाली गर्नु भयो। पछि तँलाई २ वर्षको दशा लागेको छ भन्नुभयो। अझै छ दशा। म पहिला त त्यस्तोमा ध्यान दिन्थिनँ। तर कति समयमा आमाले भन्नु भएको कुरा मिल्न गएको छ। त्यसैले यस्तो दशा लाग्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्न थालेको छ।
बुबा त झनै बढी रिसाउनु भयो होला ?
पापा त अहिले केही वास्तै गर्नुहुन्न। हि इज भेरी चिल्ड। सबै कुरा आमामा नै छ। मैले राम्रो गरेँ भने छोरीलाई राम्रो बनाइस् भन्नुहुन्छ। मैले नराम्रो गरेँ भने पनि आमालाई नै अपजस जान्छ। राम्रो ग-यो भने वाउ, नराम्रो ग-यो भने थुक्क तैंले सम्हाल्न सकिनस् भन्ने कुरा आउँदोरहेछ। छोरी मान्छेको लागि यो समाजमा धेरै गाह्रो छ।
पहिले मयंक खड्कासँगको लभ अफेयर गुपचुप नै राख्नु भयो। दोस्रो देवांश राणासँगको अफेयर्स त मिडियामा ओपन गर्नुभयो। किन ?
अन्तरवार्तामै कतिले मेरो ब्वाइफ्रेन्ड भनेर चिनाएको देखेको छु। तर मैले कहिल्यै त्यस्तो गरिनँ। तर, मैले पनि अब चाहीँ त्यस्तो गर्न थालेको छु। अब जति लुकाए पनि आइहाल्छ बाहिर। निर्देशकहरुलाई यस्तो भएको मन पर्थेन। उहाँहरुले त तिमी ब्वाइफ्रेन्ड नबनाऊ, नदेखाऊ फिल्मलाई असर गर्छ, तिम्रा फ्यान फोलोइङमा असर पर्छ भन्नु हुन्थ्यो। त्यसले पनि हो लुकाउने। तर अब लुकाएर काम छैन।
त्यस्ता निर्देशक अझै पनि छन् फिल्म क्षेत्रमा ?
अँ, सबैजना त्यस्तै हो। मैले जति डिरेक्टर भेटेँ तिनीहरुले मलाई मेरो ब्वाइफ्रेन्डको बारेमा बोल्न अनि चिनाउन दिएनन्। अनि जे भए पनि मैले कहिल्यै पनि विगतका सम्बन्धका विषयमा बोल्न चाहिनँ। अब यसरी स्क्याण्डल बनेर सार्वजनिक हुनु भन्दा आफैंले भन्नु राम्रो भनेर लुकाउन चाहिनँ। आखिर म पब्लिक फिगर हुँ। अब त्यहाँ प्राइभेट भन्ने चिज हुँदैन रहेछ। यस्तो कुरामा झुट बोल्नु हुँदैन, लुकाउनु हुँदैन भन्ने लाग्यो।
देवांशको परिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?
केही कुरा आको छैन। जसको पनि अहिले ब्वाइफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हुन्छ। यदि म सेलिब्रिटी भएको कारणले मेरो डिरेक्टरले ब्वाइफ्रेन्ड नबना, बनाए पनि नदेखा भन्नु भएको होला। लाइमलाइटमा भएपछि त्यस्तो हुँदोरहेछ। परिवारमा त सबैजना चिल्ड हुनुहुन्छ। ब्वाइफ्रेन्ड त छँदै छ नि यार ! यसको मतलब यो होइन कि म काम छोडेर ब्वाइफ्रेन्डकै पछि लाग्छु। काम पनि गरिरहेकी हुन्छु।
बिहे गर्ने निश्चित भएरै देवांशलाई मिडियामा देखाउनु भएको हो ?
अहिले मेरो ध्यान कामतिरै छ। बिहे त सायद २७–२८ वर्षमा हुन्छ होला। मलाई आज नायिका हुन्छु भन्ने थाहा थिएन। अब भविष्यमा के हुन्छ अहिले नै कसरी भन्नु ? अहिले त लङलास्टिङ नै सोचेको छु। पछि गएर केही भइहाल्यो भने पछि छँदैछ। बिहेको लागि तयार हुन, ब्वाइफ्रेन्ड पनि आफ्नो खुट्टामा उभिनु प-यो नि ! ऊ अहिले काम गरिरहेको छैन।
देवांश पढ्दैछन् ?
अँ। यत्तिकै कहाँ बिहे गर्छ ? धेरै कुरा सोच्नुपर्छ बिहे गर्न। बिहेको लागि समय छ धेरै।
कसरी लभ प-यो ?
भन्न मिल्दैन (ङिचिक्क हाँस्दै)।
ओपनै भइसकेपछि भन्न के भयो र ?
म रिलेसनसिप र काम दुवैमा सिरियस छु। सम्बन्ध भनेको पछि आउँछ मेरो लागि। पछि गएर मात्र बिहेमा सिरियस हुने हो। अहिले म काममा फोकस भइरहेको छु। सम्बन्ध त आज छ, भोलि नहुन पनि सक्छ।
अर्को स्क्याण्डल आयो भने ?
नो। म अब अर्को स्क्याण्डलको लागि तयार छैन।
कति दिनपछि रिकभर हुनुभयो ?
म अझै रिकभर हुँदैछु। यो यत्तिको सजिलो छैन (गम्भीर भावमा)।
बेस्ट फ्रेन्डले मानहानि मुद्दा चलाउन पनि प्रेरित ग-यो भन्ने कुरा आएको थियो नि ?
उसले मलाई यस्तो केस गर भनिरहेको थियो तर मलाई यो कुरालाई झन् ठूलो विषय बनाउन मन लागेन। कति जनालाई मानहानिको केस गर्ने अब ? मेरो साथी त एकदम रिसाएर वकिलसँग भेटेको पनि थियो। त्यो वकिलले मानहानिको केस गर्न मिल्छ भनेको पनि हो। तर मैले फिल्मतिर नै ध्यान दिएँ। ठिक लागेन।
पब्लिक फिगर भएर बाँच्न गाह्रो छ ?
अप्ठ्यारो छ तर गाह्रो छैन।
कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज भए ६ बिरामी, तर घर जानका लागी गाडी नपाएर परे अलपत्र
लकडाउनको असर : सरकारलाई कर्मचारीको तलब धान्नै मुस्किल
नेपाली चेलीलाई अपमान गरेको भन्दै , भारतीय विरुद्ध उत्रिए नायिकाहरु